Wareegistii Degmada Balcad - Warbixin | KEYDMEDIA ONLINE
Wareegistii Degmada Balcad - Warbixin
MUQDISHO (Keydmedia) - Wararkii ugu danbeeyay ee laga helayo degmada Balcad ee Gobolka Shabeelaha dhexe ee Koonfurta dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in Ciidamada dowladda KMG Soomaaliya iyo AMISOM ay ka hortagay Waxyaabo Qaraxa oo lagu aasay Gudaha Magaalada.
Goobjoogiyaal ayaa u sheegay Keydmedia in Ciidamada dowladda KMG ay ka hortageen Qaraxyo la doonayay in laga geeysto magaalada Balcad kuwaasi oo ay geysan rabeen Al shabab oo laga fara maroojiyay Degmada iyadoo wax dagaal ah dhicin.
Qaar kamid ah Qaraxyadaasi lagu guulaystay in la qarxiyo,iyadoo aan wax Khasaaro ah kasoo gaarin Ciidamada iyo Dadka Rayidka ah eek u nool Degmada Balcad.
Dhanka kale ciidamad dowladda waxa ay sheegeen in Deegaanno kale oo hor leh ay la wareegaan islamarkaan ay ku sii wajahan yihiin Deegaanada u dhaxeeya Balcad iyo Jowhar oo ah Xaruunta Gobolka Sh/dhexe.
Ciidamda AMISOM iyo kuwa dowladda KMG Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa inay kusii siqayaan Degmada Jowhar ee Xaruunta Gobolka Shabeelaha Dhexe oo hadda ku jirta Gacanta Al shabab.